Kutheni uGoogle Doe engakhathali | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 4, 2010 NgoMgqibelo, nge-20 kaFebruwari ngo-2016 Douglas Karr
Funda ukubhala iWebhu kunenqaku malunga kwimihlaba ifama kunye nefuthe kuphando. Sixoxe ngeziqulatho zeefama kumjikelo wesigqeba esiseWebtrends kancinci kunye nexesha langempela kubahlalutyi Ngokuqinisekileyo iya kudlala indima.
Umxholo weefama ziindawo zokupapasha ezishicilela umxholo wokubamba ukugcwala kwenjini yokukhangela inzuzo. Hmmm… kuvakala kancinci ukubhloga ukukhangela kum. Ngokwenyani ndicinga ukuba iifama zomxholo zingumbono olungileyo kwaye ziya kuphucula iziphumo zenjini yokukhangela zikaGoogle.
Baya kwenza ngokungathi bayakhathala (njengokuba besenza ngokungathi abakhohlakeleyo), kodwa abanandaba. Nasi isizathu:
Inyani yile yokuba injini yokukhangela kaGoogle iyasondela kwaye iyaqhubeka nokuba mandundu. Ukuba Umxholo weefama uqhuba iimpendulo phezulu kwiziphumo zophendlo eziphendula umbuzo wam, ndingavuya. UGoogle usimisele ukuba sicofe isiphumo, sibuyele umva, ucofe isiphumo sesibini, sibuyele umva, ucofe isiphumo sesithathu, sibuze ngamagama ahlukeneyo kwaye sikwenze kwakhona. Umthamo womxholo uGoogle uyakwazi ukuhambisa isalathiso engqondweni, kodwa iziphumo ziyafunxa.
Imodeli yengeniso kaGoogle yile thengisa intengiso, musa ukuvelisa iziphumo ezisemgangathweni zokukhangela. Ukuba uGoogle uvelisa iziphumo kuwe ayisiyiyo le nto ubuyikhangela, kodwa iphepha leziphumo linentengiso yokuqhafaza isibini esinyanzelayo, uGoogle usandul 'ukuvuzwa ngesiphumo saso esimnandi. Kukho uluhlu oluninzi lokuhlawula ngonqakrazo apho ... kwaye uGoogle ufuna indawo yokuyibeka.
Ngethuba nje iGoogle igcina isabelo sayo semarike, iya kujinga kuleso sabelo sentengiso ixesha elide. Kwakhona, uGoogle unayo zilungiselele abasebenzisi bayo ukusebenza ngeempazamo zayo. Benze ngempumelelo le nto-yiyo loo nto i-Bing isenokuba yeyona injini yokukhangela ibhetele kodwa inexesha elinzima lokususa isabelo sentengiso.
Yonke ibhlog yifama yomxholo, kwaye uninzi lweebhlog eziqondayo ukufuna Izithuba zebhlog zembewu ukujolisa kwitrafikhi enkulu yokukhangela. Ndiqaphele ngokupheleleyo ukugcwala kwenjini yokukhangela, ukulandelela amagama aphambili, kunye nomsebenzi wokubeka umxholo omkhulu oza kuqhuba ukugcwala ngakumbi. Ukwahlula njani umxholo wefama kushicilelo olusemgangathweni? Andiqinisekanga ukuba unako.
Ndicinga ukuba umxholo weefama lishishini elomeleleyo. Heck -Ndisandula ukumilisela abathengisi beTekhnoloji yeNtengiso… sisiseko sefama yezixhobo zeTekhnoloji yeNtengiso, iimveliso kunye neenkonzo. Ndinezinto ezizodwa, nangona kunjalo. Kukho itoni yesiza sokudibanisa phaya ngaphandle kwesiqulatho sembewu kodwa singaniki xabiso laso.
Enye yezi ndawo iyaziwa kwaye iyathandwa ngamakhwenkwe eSilicon Valley… uMahalo (ikhonkco lishiyiwe ngabom). UAron Wall wenze umsebenzi omangalisayo ekulandeleleni Isicwangciso esiliqili sikaMahalo sokutyhala umxholo ayizizo ezabo. Ukongeza, uJason Calacanis uyazi-kuba uyazityhala ezo zihloko zihamba kunye namaphepha kaMahalo kumajelo eendaba ukuqhuba ngakumbi ukugcwala kwabantu.
Ithetha ntoni le nto kubathengisi? Ayizondaba zimnandi… oko kuthetha ukuba awulwi nje kuphela nokhuphiswano lokukhangelwa kwiinjini yokukhangela, ukhuphisana nomxholo weefama ezinqwenela ukuphambukisa ukugcwala kwabantu kwiindawo zabo ukuze bafumane inzuzo.
Xa umxholo weefama utsala indawo yokukhangela eyaneleyo kunye nokugcwala kwabantu ukuba banakho ukuxhasa inkqubo yabo yokuhambisa intengiso enenzuzo ngaphezu kweGoogle… kungoko kuphela apho uGoogle azakukhala engcolileyo kwaye aqale ukwenza okuthile malunga noku.
tags: ukulima umxholoGoogle +yokusingathaenjini yokukhangela nounSEO
IiWebtrends eziNgezelelweyo zeDemo